Ronaldino oo farriin maca-salaamayn ah soo qoray! – Gool FM
Raage January 20, 2018
(Porto Alegre) 19 Jan 2018 – Ronadinho ayaa go’aansaday inuu ciyaaraha gebi ahaanba ka fariitso, isagoo farriinyaa soo mariyay walaalkii Roberto de Assis oo arrintan u bandhigay bahda isboortiga.
Yeelkeede, jookarkii hore ee Gremio, PSG, Barcelona, ​​Milan, Flamengo, Atletico Mineiro, Queretaro iyo Fluminense ayaa laftiisu Facebook soo dhigay farriin qalbi dhaqaajis ah isla markaana maca-salaamays ah oo uu Ronaldinho kaga sheekeeyay waayihiisii ciyaareed:
“Alle ayaa ku mahadsan nolosha uu i siiyay, qoyska, asxaabta iyo xirfaddaan. Kaddib ku dhowaad 3 toban sanaale oo aan u huray kubadda cagta, waxaan ka tegayaa riyadaydii iigu waynayd, riyo ii rumowdey.
”Muddo 20 sanadood ah waxaan sameeyay wixii aan jeclaa, waxaan ku dhex noolaa riyadan oo ah midda cunug kasta, safarrada, guulaha, guuldarrooyinka, qaadista astaanta calanka, kasoo dhex bixidda dusmada, qolka lebbiska, soo gelitaanka garoonka, kabihii aan adeegsadey, bandhig wanaag iyo xumo, sagootinnadii, laacibiintii aan la dheeley, oo ay ka mid yihiin kuwo aan ilaa maanta u riyaaqo.
”Wax kastaahi waxay ahaayeen qayrul caadi! Aabahay iyo qoyskaygu in badan bay i taageereen si aan halkan usoo gaaro, waxay ahayd shaqo wadareed. Waxaannu soo gaarney dhamaadka marxaladda 1-aad annagoo hayna sheeko qurux badan oo aannu ka sheekayno.
”Waad i taqaanaan, si wanaagsan baad ii taqaannaan inaan ahay nin xishood badan oo aan in badan hadlin, balse waa inaan idiin mahad celiyaa in badan, maxaa yeelay waxaan sameeyay wixii aan jeclaa anigoo kaalmo ka helaya qof kasta.
”Macallimiin, agaasimayaal, taageerayaal, xitaa kuwa iga horjeeda, darawal bas, wiilasha kubadda soo qabta, garsoorayaasha iyo saxaafadda. Waad mahadsan tihiin, sheekadan waannu isla dhisnay, waayo la’aantiin waxba ma suuragaleen.
”Ku mahadsanidiin farriimaha iyo kalgacalka aan dhamaadka lahayn. Hab wayn, waan ku faraxsanaa inaan ciyaarahan ka dhigto xirfaddeeyda“. ayuu farriintiisa kusoo koobay Ronaldinho.
DAAWO: ''Waa inaan ciyaaraha dilnaa xilli fiican'' - Gattuso
DEG DEG: Sanchez oo soo gaaray Carrington [Daily Mail]